Ịre ahịa Jenụwarị, jiri nlezianya were ha mee ihe! | Bezzia
Ịre ahịa Jenụwarị, jiri nlezianya were ha mee ihe!
Maria onyekwere | 09/01/2022 22:00 | Akụkọ
Friday ikpeazụ na omenala Jenụwarị ire. Ahịa nke ihe niile na-egosi ga-emeziwanye ahịa ma e jiri ya tụnyere mkpọsa ịre ahịa nke 2021 na nke anyị ji n'aka na ọtụtụ n'ime gị ga-adabarịrị, ànyị na-ezighị ezi?
Ndị ọzọ na-agabeghị ahịa ahụ nke ọma, ị ga-erite uru na ya nnukwu ego n'ime ọnwa Disemba na Jenụwarị. Na bụ na decentralization nke ahịa bụ a na-emekarị na-eso anyị na-adịbeghị anya. Ha abụọ bụ nhọrọ dị mma iji nweta ngwaahịa ndị ahụ anyị chọrọ na ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa, agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile na-aga!
Ụlọ ahịa ndị ahụ na-ebu ụzọ jiri ohere a na-achọ onyinye Krismas wee malite ire ahịa ahụ malite n'ihu ọha na Jenụwarị 7, mgbe ụbọchị ndị eze gasịrị. Ma n'agbanyeghị na ọtụtụ ụlọ ahịa na-amalite ịkwalite ụfọdụ ego otu izu gara aga, nke a ka bụ ụbọchị anyị nwere ike ikwu maka ire ere.
1 Igodo iji nweta uru ahịa
1.1 Emefukwala ihe karịrị ị nwere ike imefu.
1.2 Soro ọnụ ahịa iji chekwaa
1.3 Lelee ọnọdụ ịzụrụ
1.4 Debe tiketi ma kwụọ ụgwọ
Igodo iji nweta uru ahịa
Ma gịnị bụ igodo iji nweta uru nke ahịa ahụ? Ahịa ahụ na-abịa karịa mbelata 50% na ụlọ ahịa ụfọdụ, yabụ na ha dị nnọọ adaba ịzụta ihe anyị chọrọ n'ezie. Otú ọ dị, mbelata ego abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị atụmatụ iji gbaa anyị ume ịnọgide na-azụ ahịa nke ọ dị mfe ịdaba. Zere ya ma were ohere nke ire ere na ndụmọdụ ndị a.
Emefukwala ihe karịrị ị nwere ike imefu.
Ịre ahịa bụ oge dị mma iji zụta na-emefughị ​​ihe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịzụrụ ihe ụfọdụ maka nanị ịwelata ala, ego ndị ahịa ahụ nwere ike ịkpata ga-apụ n'anya. Na otu esi ezere ya?
mee ndepụta tupu ihe ị chọrọ.
N'ịtụle ndepụta gara aga, ọnụahịa ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa ndị dị otú ahụ na ọnọdụ ego gị setịpụ ego ma kwanyere ya ùgwù.
Nye ụzọ. Ọ bụrụ na mmefu ego anaghị ekwe ka ịzụrụ ihe niile ịchọrọ, buru ụzọ na-ebute ihe kacha mkpa.
Soro ọnụ ahịa iji chekwaa
Ị na-echekwa ego n'ezie site n'ịzụta otu ihe na-ere? Cheta ihe ndị ahụ ewedara ala ga-egosi ọnụahịa mbụ ha na-esote mbelata ego, ma ọ bụ gosi n'ụzọ doro anya pasent nke mbelata ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ n'ezie na ị chọrọ ịzụta ihe na-anọchi anya a oké ego maka gị, ezigbo bụ na ọnwa tupu ị na-eso isiokwu na mara otú ya price fluctuates mara ma ọ bụrụ na ị na-n'ezie na-akwụ obere maka ya.
Lelee ọnọdụ ịzụrụ
N'ụlọ ọrụ ụfọdụ Ọnọdụ ịzụrụ nwere ike ịdị iche na oge ire ere. Ha nwere ike ha agaghị anabata ịkwụ ụgwọ kaadị kredit, guzobe ọnọdụ ọhụrụ maka mgbanwe ma ọ bụ anabata nkwụghachi. Ha nwere ike, mana a ga-ekwupụtarịrị ọnọdụ ndị ahụ. Mgbe ị nwere obi abụọ, lelee ha!
Ihe na-ekwesịghị ịgbanwe bụ mgbe-ahịa ọrụ na ngwa akwụkwọ ikike. Ndị a, n'agbanyeghị ma ịzụrụ ngwaahịa ahụ n'oge ahịa ma ọ bụ n'èzí oge ahụ, ga-abụrịrị otu. Ekwela ka ha ghọgbuo gị!
Debe tiketi ma kwụọ ụgwọ
Debe tiketi ahụ nke ịzụrụ ihe niile ị na-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbanwe, nkwụghachi ma ọ bụ tinye akwụkwọ mkpesa. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ma ọ bụ weghachi ihe, debe ya n'igbe ya. Ọ bụghị ụlọ ọrụ niile ga-eweghachite ego gị, mana ọtụtụ na-enye gị ohere ịgbanwe ya ma ọ bụ nweta ụlọ ahịa maka ọnụ ahịa ya iji nọrọ ma emechaa na ụlọ ahịa n'onwe ya.
Dị ka onye na-azụ ahịa n'oge ịre ahịa, ị ga-enwe ikike dịka n'oge ọ bụla ọzọ n'afọ. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na-edozighị ya nke ọma, ị ga-enwe nhọrọ mgbe niile rịọ maka akwụkwọ mkpesa ma tụgharịa uche na ya mkpesa gị ma ọ bụ mkpesa gị.
Ịzụ ahịa na ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi Na site n'ịgbaso ndụmọdụ ndị a, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ire ahịa Jenụwarị n'ụzọ dị mma, ịzụ ahịa nke ọma na n'enweghị ịkwa ụta mgbe ị na-etinyekwu ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ịre ahịa Jenụwarị, jiri nlezianya were ha mee ihe!
Uru niile nke egbe ịhịa aka n'ahụ
Uru nke nnu mmiri maka ahụ na ntutu isi